Muxuu salka ku hayaa socdaalka siyaasadeysan ee MW Ismaaciil Cumar Geelle - Muqdisho Online
Home Wararka Muxuu salka ku hayaa socdaalka siyaasadeysan ee MW Ismaaciil Cumar Geelle
Muxuu salka ku hayaa socdaalka siyaasadeysan ee MW Ismaaciil Cumar Geelle
Socdaalka siyaasadeysan ee Madaxweyne Geelle! Madaxweynaha dalka Jabuuti ,Ismaaciil Cumar Geelle iyo wafdi ballaaran oo uu hoggaaminayo ayaa socdaal siyaasadeed ku soo gaaray magaalada Muqdisho. Socdaalka Madaxweyne Ismaaciil Cumar Geelle ayaa u muuqda mid uu maqaam siyaasadeed oo weyn ugu Raadinayo in Dalka jabuuti oo ah mid ay hogaankiisa gacanta ku hayaan Madax Soomaaliyeed oo ka tirsan Qawmiyada Soomaaliyeed ee dagta Geeska Afrika. Bilowgii sanadkan Madaxda Jabuuti waxay dareentay in caasimada Muqdisho ay noqotey xero ay iska maamushaan hogaamiyayaasha dalalka Ethiopia iyo Eritrea, arinkaas oo ah mid u cuntami waayay Madaxweyne ismaciil Cumar Geelle.
Waxaana Socdaalkiisa loo badinayaa in uu salka ku hayo sidii uu sadex arimood uga dhaadhicin lahaa Hogaanka Madaxweyne Farmaajo, kuwaas oo kala ah:-
=QODOBKA 1-AD:- dalka iyo dadka reer Jabuuti waa Soomaali markasta waa inaad ogaataa dalka Eritrea waxaan isku haynaa dhul badeed muhiim ah waa inaad ka fogaateen khiyaanada Madaxweyne Isaias Afwerki uu isaga horkeena Qowmiyadda Soomaaliyeed ee wada dhalatay.
=QODOBKA 2-AD:- furitaanka dhismaha cusub ee Safaaradda dalka Jabuuti oo ah midda labaad ee ugu weyn oo safaaradaha waqtiga ka furan Moqdisho waxay safaarada Jabuuti noqoneysaa mid hawlo siyaasadeed Qabata sida dib u heshiisiin ama wacyigalinta, iyo khilaafyada ka dhex abuurma Qeybaha bulshada Soomaaliyeed. Taas oo umuuqata in Jabuuti meesha ka saareyso saameynta Dawladaha Turkiga. Qatar iyo Ethiopia oo ay Safaaradahoodu waqti dheer ku dhex jireen Kooxaha Siyaasadeed ee Soomaaliya isku haya. Gaar ahaan Guriga villa somalia ay ku yeesheen koox danahooda soomaaliya uga wakiila
=QODOBKA 3-AD:- dawlada Jabuuti waxey doonaysaa inay sameyn weyn ku yeelato arimaha amniga iyo Siyaasadda ee Soomaaliya, ee ay wadaan AU (Amisom) iyo UN,EU. Waxey kaloo dooneysaa iney Beesha Caalamka ka iibiso kaalinta ballaaran ee ay dowlada Jabuuti ku laheyd geeddi-socodkii dhismaha dowladnimada Soomaaliya kaas oo ka soo bilowday Shirkii Carta ee sanadkii 2000 iyo inay ka mid tahay Dawlad ka tirsan Qowmiyada Soomaaliyeed ee dagta Geeska afrika. Way adag tahay in Madaxweyne Farmaajo uu fahmi karo danaha Qowmiyada Soomaaliyeed ee iskuwada xeran ee ku nool Gobalka Geeska afrika inta uu hogaanka dalka Ethiopia uu Raysal Wasaare Abiya Ahmed ka yahay wuxuu Madaxweyne Farmaajo u arkaa saaxiib dhow oo ku ilaalin kara kursiga Madaxweyne ee Soomaaliya. Hadaba waxaan Falanqeyntan kooban ku soo Gababaynayaa su’aasha ah.?
Socdaalka Madaxweyne Ismaaciil Cumar Geelle ku yimid magaalada Muqdisho ma ku Fashilin karaa heshiisyadii ay horey u wada gaareen dalalka Somalia Eritrea iyo Ethiopia, kuwaas oo lagu xusay iney bulshada 3-da dal dhexmaraan iskaashiga dhinacyada Siyaasadda, Dhaqaalaha, Bulshada, Dhaqanka iyo Amniga.? Jawaabta waamaya Madaxweyne ismaciil cumar Geelle waxay dhibaato ka haysataa dalka Turkiga iyo Qatar oo diidan in Madaxweyne geele sameyn ku yeesho hogaanka kooxda villa somalia waqtigan xukunta.
Danjire maxamed caalim [email protected]
Previous articleSiyaasi Muqtaar ”Farmaajo iyo Kheeyre waxaa u muuqda daadinta dhiiga shacabka”
Next articleHalka ay mareyso khiyaanada, marin habaabinta shacabka Soomaaliyeed & meesha aay ka soo bilaabatay
Dowladda Ruushka oo kordhinaysa taageerada ay siiyo Soomaaliya
Sharmarke Xuseen - September 17, 2019
Maraykanka oo u muuqato in uu taageeri doono qorshaha Kenya &...
Safia Ali Yasin - August 10, 2019